Kwinqaku lethu elithi "Ukukhulelwa nesifo sengqondo somnyuba" uya kufunda: indlela yokukhusela, okanye ngokuchanekileyo unyango lwegazi lokukhupha xa ukhulelwe. Ngaphezulu kweminyaka emininzi yokuba nomfutho wexinzelelo ophezulu unakho ukukhula kungekho nzima, kodwa kungengxaki ephantsi.
Ngoko, ngokusuka kwimvelaphi yokhuseleko lwegazi, igobolondo langaphakathi leempahla litshintsha isakhiwo sayo. Kwezinye iindawo, iimpawu ziqala ukwakha - i-atherosclerotic plaques eziphazamisa ukuhamba kwegazi kwaye ziyindawo yamacenge egazi.
Kwiinkqubo ze-thrombosis, intliziyo inxaxheba. Ukwanda kwimiba yalo, ukuphazamiseka kwesigqi kunye namandla okuphulaphula kukhokelela ekutshintsheni kwimijikelezo egazini yegazi, kwaye ngoko ke ukuphazamiseka kwayo.
Ngenxa yobunzima bayo, umngcipheko we-thrombosis unokulinganiswa nomngcipheko wesifo, isifo senhliziyo kunye nezinye iingxaki ezibulalayo. Ngenxa yokuba i-genesis yale miqathango iphulaphulo legazi eliqhelekileyo.
Umfazi okhulelweyo uthembele kuwe? Ukulala ubusuku bobusuku obu-8, ukuzivocavoca ngokulinganisela, ukwenqatshwa okanye ukuthintela ekudleni amafutha, isiselo esinamanzi kunye nesiselo esinxilisayo sele senze izinto ezifunekayo zokuzinzisa ukunyanzeliswa. Ngokuzimeleyo unokuqala ukuthabatha amaqoqo kunye nama teas.
Ukulungiselela amacandelo :
Amagqabi amaMint, iinjande ze-valerian, i-chamomile iintyatyambo, izithelo ze-cumin, izithelo ze-fennel-kwiindawo ezilinganayo. Thatha 1 tbsp. umxube wepuni, uthele igrlasi yamanzi abilayo, ugxininise imizuzu eyi-15. kwaye uthathe ngaphambi kokulala.
Iingcambu zeValerian, amaqabunga ahlambulukileyo e-motherwort, izithelo ze-cumin, izithelo ze-fennel - kwiindawo ezilinganayo.
2 tbsp. Spoon umxube nge-2 izindebe zamanzi abilayo, gxininisa ngaphambi kokupholisa, ukuxhatshaza kwaye uthathe ubusuku novuyo lwentlonelo kunye nokukhathazeka.
Iinkalo zonyango kuphela ziqinisekisa ubungakanani bokusasazeka kwezi zifo kubasetyhini abakhulelweyo. Kuqikelelwa ukuba abafazi abangamashumi amathathu baphantsi kwekhulu baphila ngexinzelelo legazi okanye, ngokwesayensi, i-hypertension.
Inkcazo yesifo .
Ngokuqhelekileyo, uxinzelelo lwegazi kumfazi okhulelwe akufanele libe ngaphezu kwe-140/90. Idijithi ephezulu ibizwa ngokuba ngumxinzelelo we-systolic, ophantsi ubizwa ngokuba ngumxinzelelo we-diastolic, kunye nezigaba zenhliziyo. Ukwanda kunokuba njengamalungu amabini, kwaye ngaphezu kweyiphi na icandelo elinye. Ukwanda kwe-isolation kwisixinzelelo se-systolic kubonisa ingxaki yesiphumo senhliziyo kunye nemeko ye-aortic. Uxinzelelo lwe-Diastolic lubonisa ixabiso leenqanawa zomhlaba.
Kwiimeko ezininzi, ukuxilongwa kuyenziwa nge-"random". Oko kukuthi, xa ukhulelwe, xa isigulane sidibana nodokotela ngxaki ehlukile, kwaye xa kuhlolwa kunye ne-tonometry ngokukhawuleza kufumanwe ngokuphakanyiswa kwamanani e-blood pressure. Oku kungqina ngokuqinisekileyo ukuba abantu abanolwazi ngokuchasene nesi sifo kwaye abayilandelanga impilo yabo. Kwaye ama-40 ekhulwini kwabasetyhini abaphakanyisile inani labaxinzelelo begazi abazi konke oku.
Kukholelwa ukuba isongelo esisisiseko kwimpilo yomama osemncinci kukuphuhliswa kolukhulu lweengxaki ze-blood pressure. Ukuphakama, njengommiselo, ngokuchasene nemvelaphi yenkxwaleko yexinzelelo, kudla ngokukhokelela ekudakaleni okukhulu kwimeko yesigulane, ukukhubazeka kwaye, ngelanga, kwezinye iimeko, ukufa.
Ezi nkathazo ziqhelekileyo kubafazi abakhulelweyo :
Ingozi ye-cerebrovascular accident (stroke)
Ukungaphumeleli kwentliziyo ekhoyo phambi kwe-infyoction ye-myocardial
Umonakalo kwi-retina yelihlo
Zonke iindlela zonyango loxinzelelo lwengqondo zingabelana ngokwahlukileyo kwaye kungekho mveliso. Zonke izilungiso ezizodwa kufuneka zimiselwe ngugqirha. Phakathi kobuninzi beqela lezilwanyana ezizodwa liza kukhetha ukuba unonophelo. Musa ukuxhomekeka kwiingcebiso zomhlobo kunye nomabonwakude. Yintoni efanelekileyo kumntu omnye, inokulimaza omnye.
Umsebenzi wokwenyama ngexesha lokukhulelwa
Indlela yokufumana uthando emva komtshato
I-fletlet yenkukhu kwi-sauce ecocekileyo kwi-multivariate
Iidlela zokubhenca ezibandayo
U-Angina kubantwana abangaphantsi komnyaka omnye
Ukunyamekela, iinkqubo ze-cosmetology
U-Polina Gagarina ususe iifoto ngenxa yeengxelo ze-anorexia
Luhlobo luni lokukhupha isidlo luya kunceda ukucoca umzimba